Xafiiska diiwaangelinta Xisbiyada siyaasadda oo maanta laga furay Muqdisho | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Xafiiska diiwaangelinta Xisbiyada siyaasadda oo maanta laga furay Muqdisho
Xafiiska diiwaangelinta Xisbiyada siyaasadda oo maanta laga furay Muqdisho
Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka ayaa markii ugu horreeysay furay diiwan galinta KMG ah ee Xisbiyada siyaasadda dalka.
Guddiga ayaa maanta soo soo bandhigay foomamka diiwaan galinta KMG ah, iyada oo ay goobta joogaan qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha xisbiyada siyaasadeed ee dalka iyo mas’uuliyiinta Guddiga Madaxa Banaan ee Doorashooyinka Qaranka.
Xaliimo Sheekh Ismaaciil “Xaliimo Yarey” Guddoomiyaha Guddiga Madaxa Banaan ee Doorashooyinka Qaranka ayaa sheegtay in diiwaan galinta KMG ah ee maanta la daah furay ay fursad badan siineyso xisbiyada siyaasadeed ee dalka.
Guddiga Madaxa Banaan ee Doorashooyinka Qaranka ayaa ku howlan hirgalinta doorashooyin qof iyo cod ah oo dalka ka qabsoonta mustaqbalka.
Previous articleQurba joogta Soomaaliyeed oo lagu dhiira geliyay iney ka qeyb qaataan horumarka dalkooda+Sawiro
Next articleWasiirka Amniga “Mas’uuliyiin ka tirsan laamaha amniga ayaa u xiran falkii lagu dilay Xoghayihii Ururka Haweenka Qaranka”